/blog/Gallery/Root Isotretinoin (Accutane) ee finanka: Daweynta finanka leh Isotretinoin
Posted on 02 / 01 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Isotretinoin waa daaweyn finan oo xooggan. Halkan, waxaad arki doontaa dib u eegista isotretinoin, isticmaalka isotretinoin, saameynta daaweynta isotretinoin iyo macluumaadka kale ee ku saabsan dawada, oo ay ku jiraan qiyaasta iyo tallaabooyinka taxadarka ah.
Waa maxay Isotretinoin (Accutane)?
Miyaad raadineysaa Isotretinoin cayriin (Isotretinoin 4759-48-2)? Waa hagaag, haddii aanad garanaynin, Isotretinoin waa daawo dhakhtar qoray oo xoogan. Isticmaalka daawada isotretinoin, daawada waxaa loo isticmaalaa daaweynta iyo ka hortagga xanuunka daran ee nudheerta ah ama finanka cystic.
Marka ay timaado guryaha kimotretioin kiimikada, isotretinoin qastu waa asal ahaan 13-cis-retinoic acid. Waxay u egtahay huruud ah budada dufanka badan leh iyo waxay leedahay miisaanka molecular ee 300.44. Waxay la xiriirtaa retinoic acid iyo sidoo kale retinol (fitamiin A).
WKoofiyadu waa finanka cystic?
Waxaa laga yaabaa in aad ka fekereyso finanka cystic. A finanka cystic waa nooc aad u daran oo finanka kaas oo ka dhalan kara maqaarka maqaarka ee xiran, keenaya caabuq iyo barar. Dad badan, qiyaastii 80 boqolkiiba dadka da'doodu u dhaxayso 11 iyo 30 ayaa la tacaalaya finanku, laakiin qayb yar oo ka mid ah ayaa leh finanka cystic, taas oo ka daran finanku caadiga ah.
Cudurka finanku badanaa wuu ka weyn yahay oo ka sii daraa lafdhabarka joogtada ah oo aan laga tagin xataa xitaa ka dib markaad qaadato daawo finan ah. Xakameynta cystic waxay noqon kartaa mid xanuun badan, waxayna inta badan ka baxdaa nabar qoto dheer.
Waxaa laga yaabaa in finanku sii socoto inuu sii kordhayo inkastoo dadaalkaaga tirada badan ee laga tirtirayo. Uma baahnid inaad raadiso isku mid ah isku midka ah isku midka ah. Ereyga waxaa loola jeedaa korodhka degdegga ah ee xaddiga wax, kiiskan, finan. Sidaa daraadeed, isbarbar-dhigista is-weydaarsiga waa isku dhufashada, fidinta, ama kor u kaca.
Hadda, taasi waa dhinac.
Haddii aad isku dayday dhammaan hababka kale ee caafimaadka sida antibiyootikada afka iyo daawooyinka kale ee la isku qaadsiiyo si loo daweeyo faafidda cystic fungus ama finanka cyst, laakiin aan waxtar lahayn, Isotretinoin waxay u badan tahay inay noqoto xalka ugu dambeeya. Ka sokow, daroogada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta xaaladaha kale ee maqaarka, iyadoo ku xiran talada dhakhtarka.
Isotretinoin waa daroogada retinoid, wax soo saarka vitamin A. synthetic waxaa sidoo kale waxaa loo yaqaan by magacyadooda ay:
Sidoo kale, daroogada ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo guud.
Sidee ayuu Isotretinoin u shaqeeyaa?
Ka sokow, Isotretinoin wuxuu isticmaalaa, laga yaabee inaad la yaabto, "sidee ayuu u shaqeeyaa Accutane?" Waa maxay sababta ay u tahay mid aad u awood badan oo ay sameyn karto qaar ka mid ah daawooyinka antibiyootikada iyo dawooyinka maadiga ah?
Waa hagaag, halkan waa sharaxaad jawaabta su'aasha 'sidee ayuu u shaqeeyaa Accutane'?
Sidoo kale daawooyinka kale ee retinoid, Shaqooyinka isotretinoin adiga oo bedelaya warqada DNA-gaaga. Saameynta isbeddelka waa yareynta cabbirka iyo sidoo kale soo saarida qanjidhada xayawaanka.
Marka aad qaadatid Isotretinoin, waxay yareeysaa qanjidhada maqaarka ee maqaarka ee mas'uulka ka ah wax soo saarka sebumaha. Sebum waa walax oli ah oo soo-saarkiisa xad-dhaaf ah wuxuu keeni karaa arrimaha maqaarka oo kala duwan sida finanka.
Sebada xad-dhaafka ahi waxay ka kooban tahay qanjidhada xayawaanka, taasoo ka hortagaysa saliidda maqaarka ka soo baxaysa. Tani waxay keenaysaa isku-darka saliidda ee maqaarka. Bakteeriyada keenta finanka cystic (acne vulgaris) waxay u muuqdaan inay ku soo baxaan xaalad sida sebum ay tahay cunadooda.
Marka acne vulgaris quudiyo sebumta maqaarkaaga, waxay soo saaraan waxyaabaha qashinka ah iyo sidoo kale astaamaha dufanka leh. Cudurka qafiifka iyo acids ayaa ka xanaaqaya qanjidhada xayawaanka ah waxayna ka dhigaan in ay bararaan. Dhibaatooyinka maqaarka ayaa sidoo kale dhaca.
Marka, marka Isotretinoin ay hoos u dhacdo qanjidhada qulqulka leh, xaddiga dalagyada sebumta ayaa yaraynaya. Sidaa darteed, dhirbaaxada dhuunta ee sebumta ayaa la yareeyo sidoo kale. Iyadoo la tixgelinayo in finanku, ama finanku, inta badan waxay ku dhacdaa natiijada maqaarka maqaarka ah ee ay ku dhacaan sebum, saameynta daawada ayaa ka talisa iyaga.
Waxay ka hortagtaa qanjidhada qanjidhada xayawaanka iyo sidaas awgeed, waxaa suurto gal ah in bakteeriyadu ay kudhowaan maqaarka. Daawada ayaa sidoo kale yareyneysa maqaarka maqaarka. Ka sokow, daroogada ayaa sidoo kale yaraynaysa adkaanta unugyada la gooyey qanjidhada xayawaanka. Tani waxay yareyneysaa awooddooda si ay u sameeyaan madax madow iyo madaxyo cad.
Rood Isotretinoin oo loogu talagalay Daaweynta finanka
Isotretinoin 4759-48-2 waa shaki la'aan daaweynta finanka ugu dambeyn, gaar ahaan kiisaska halista ah ee isticmaalka antibiotics iyo dawooyinka finanka ee finanka ah ayaa la siidaayey. Hal wax weyn oo ku saabsan Isotretinoin sida daaweynta finanku waa inaad u isticmaasho mudo gaaban, oo laga yaabo in 16 usbuucyada 20 inay ku niyad jebiyaan nudahaaga, iyadoon loo eegin sida ay u daran yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaaga haragga wuxuu kugula talin karaa koorso labaad oo daaweyn ah mudo la mid ah si loo buuxiyo finankaaga. Tani waxay ka duwan tahay inta badan daawooyinka kale ee finanka kuwaas oo laga yaabo inaad u baahato inaad si joogto ah u isticmaasho wakhti dheer ama xitaa weligiiba si aad finanku u ilaaliso.
Inkastoo ay dhif u tahay inaad mar labaad kuusoo qaaddo finanka mar haddii lagugu daaweeyo daaweynta Isotretinoin, takhtarka takhasuskaaga maqaarka ayaa kugula talin kara inaad u gudubto dawada finanka ah ee loogu talagalay ilaalinta maqaarkaaga cusub, finanka finanka ah.
Mudo intee le'eg ayey qaadanaysaa mid si aad u aragto natiijooyinka Accutane?
Tani waxay kugu qaadi kartaa adigoon la yaabin haddii aan waligaa laga maqlin sababta oo ah waxay ka soo horjeedaa filashooyinkaaga; Neeftaadu waxay ka sii xumaan kartaa markaad qaadato Isotretinoin. Hey! Ha haawanin!
Si kastaba ha ahaatee, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto Natiijada Accutane gudaha 7 illaa 10 maalmood ee daaweyntaada. Maqaarkaaga ayaa billaabi doona tartiib tartiib tartiib ah mudadaas.
Inta badan, buuxinta finanka buuxa ee buuxa ama buuxa waxay ku dhacdaa 16 ilaa toddobaadyada 24 ee koorsada daaweynta. Marka aad kooraska ku jirtid, waxaad u maleyneysaa in aad marar badan ku jirtid finan-lacag la'aan muddo dheer.
Koorsooyin lagu celiyo waxaa lagu talinayaa oo keliya kiisaska dib-u-dhac dhab ah oo la ogaado kaddib marka daaweyntu socoto. Si kastaba ha ahaatee, koorsooyin soo noqnoqonaya waa in la bilaabo ugu yaraan toddobaadyo XNUM ka dib maalinta ugu dambaysa ee koorsada hore (koowaad). Sababtoo ah finanku waxay u badan tahay in ay ku fiicnaadaan xilligaas ka dib koorsada koowaad.
Sida loo isticmaalo Isotretinoin
Accutane (Isotretinoin) wuxuu ku jiraa afka 10-mg, 20-mg iyo sidoo kale 40-mg jilicis jilicsan oo jilicsan. Waxyaabaha ku jira khariidad kasta oo daroogada ah waxaa ka mid ah beeswax, saliidda hydroxyanisole, saliida soybean, dietetium diet, saliidda qudaarta iyo sidoo kale saliidda saliidda ee hydrogenated.
Mid kasta oo isotretinoin 10mg, isotretinoin 20mg iyo isotretinoin 40mg waxay leeyihiin nidaamyo dheeh oo kala duwan. Isotretinoin 10mg waxay ka kooban tahay qiiqa birta ah (casaan) iyo titanium dioxide, 20mg wuxuu leeyahay FD & C Red No. 3, FD iyo C Blue 1, iyo titanium dioxide halka 40mg uu leeyahay FD & C Yellow Yellow 6, D & C Yellow No. 10, iyo Titanium Dioxide nidaamyada.
Luuqada layman ee isotretinoin 10mg waxay ku timid midab casaan ah, 20 mg maroon, halka 40 mg yihiin huruud.
Qiyaasta Isotretinoin waxay u kala duwan yihiin bukaanada kala duwan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aad raacdo warqadda dhakhtarkaaga ee tilmaamaha isticmaalka ee calaamaddeeda.
Xeerka suulka ayaa ah in qiyaasta daawada isotretinoin ay ku xiran tahay miisaanka jirka, arimaha caafimaadka ee aad isticmaashid daawada iyo sidoo kale xoogga daawada.
Dadka qaangaarka ah iyo carruurta ee ugu yaraan da'doodu tahay 12, qiyaasta celceliska qiyaasta maalinlaha waa 0.5 ilaa millimitirka 1 (mg) halkii kilo (kg) ee miisaanka jirka. Mid kasta oo qiyaasta dhakhtarkaagu kugula taliyo, waa in mar walba la qaato cunto.
Qaadashada Isotretinoin waxaa loo qaadaa laba qiyaasood oo kala duwan, bukaanka u qalma waa inay u qaadaan 15 ilaa toddobaadka 20. Carruurta da'doodu ka yartahay 12 sano, qadarkooda waa inay dhakhtarkooda go'aaminayaan.
Haddii dhakhtarkaagu kuu sheego 0.5 mg / kg / maalin qiyaasta isotretinoin, taas macnaheedu maahan inaad qaadanayso qiyaasta daaweynta inta lagu jiro daaweynta. Iyadoo ay ku xiran tahay jawaabtaada daawada, gaar ahaan illaa inta aad ka soo daahday finanka cysticdaada iyo muuqaalka daaweynta saameynaha kiliinikada ah, ayaa dhakhtarku qiyaasi karaa qiyaasta.
Waa kuwan celceliska Isotretinoin 4759-48-2 sida ku xusan miisaanka jirka
Wadarta mg / maalin
Kgs £ 0.5 mg per kg 1 mg per kg 2 mg per kg *
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo ka reeban qiyaasta tallaalka. Dadka waaweyn ee qaba finanka cystic daran waxay keeni karaan cabsida ama finanka noodhuubyada inta badan lagu arko dhabarkooda waxay u baahan karaan hagaajinta ugu badnaan 2.0 mg / kg / maalin, iyadoo ku xiran dulqaadka dulqaadkooda (Isotretinion).
Accutane (isotretinoin) waa in lagu qaataa cuntada. Waxaa lagugula talinayaa in aad qaadato qadar kasta oo ah daroogada isla markiiba ka dib cunto ama cunto fudud si loo hubiyo waxtarka ugu badan ee daawada.
Ku guuldareysiga qaadashada daroogada cuntadu waxay hoos u dhigaysaa nuugista jirka. Sidaa darteed, ka hor inta uusan takhtarkaaga u dhigin qiyaastaada sare si loo kordhiyo waxtarka daroogada, waxaa lagu weydiin doonaa sida aad u hoggaansameysid tilmaamaha cuntada.
Sidoo kale, waa inaad liqaa qandhada "Accutane" oo dhan adigoon jajabin, jebin, cunin ama jaqin. Ka sokow, waxaad u maleyneysaa inaad ku liqi karto galaas biyo ah.
Hal koorso oo Isotretinion ah ayaa la cadeeyay inuu keeno cadho buuxda ama joogto ah ee finanka cystic. Si kastaba ha noqotee, sida horay loo soo sheegay, haddii uu maqaarkaaga maqaarku u arko inuu lagama maarmaan u tahay inaad hesho daaweyn labaad, waa inay bilaabataa laga bilaabo toddobaadkii siddeedaad kaddib marka koorsada koowaad dhammaato.
Daraasadda si loo falanqeeyo waxtarnimada qiyaasta daawada isotretinoin, waxaa la aasaasay in dhammaantood ay bixiyaan bilowga nadiifinta finanka. Si kastaba ha noqotee, dib u soo celinta qiyaasta hoose ayaa lagu ogaadey inay tahay mid ammaan ah.
Waxa la iska ilaaliyo intaad qaadanaysid isotretinoin
Uur qaadida intaad qaadaneyso daawada iyo bil gudaheed kadib markaad dhameysatid koorsada daaweynta.
Naasnuujinta inta lagu jiro muddada daaweynta iyo hal bil kadib kooraska. Waxaa la tuhunsan yahay in daroogadu ay ku dhaafi karto caanahaaga oo ay dhici karto in ay waxyeelo u geyso ilmahaaga laakiin ma jirto caddayn cilmi ah oo lagu soo celinayo shaki.
Ku deeqidda dhiigga markaad qaadato dawada iyo bil gudaheed kaddib marka ay dhammaato koorsada daaweynta. Haddii haween uur leh ay hesho dhiiggaaga la siiyay, ilmahaa waxaa laga yaabaa inuu halis ugu jiro dhibaatooyinka soo raaca daawada.
Qaadashada daawooyin kale ama waxyaabaha dhirta ka kooban ee Accutane (isotretinoin) haddii aadan haysan dhakhtarkaaga.
Gawaarida habeenkii haddii dhacdo aragti habeenki ah ay saameysay Accutane (isotretinoin).
Helitaanka nidaam la isku qurxiyo ee maqaarka oo ladnaanaya, intaad qaadaneyso Accutane iyo lix bilood kaddib marka daaweynta la qaato. Nidaamyada waxaa ka mid ah maqaarka, dermabrasion, iyo lasers. Daawada ayaa kaa dhigi karta mid aad u nugul in lagu nabaro ka soo baxo nidaamyadan.
Haysashada qoraxda qorraxda iyo iftiinka ultraviolet. Daawada waxay kordhin kartaa dareenka maqaarkaaga nalalkan.
La wadaagida daawada dadka kale. Sida hore loo soo sheegay, daroogada waa in loo qaato warqadda dhakhtarka.
Qaadashada Isku-ka-dhaafka (isotretinoin)
Haddii ay dhacdo in aad seegto qiyaasta daawadaada, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan u qaadato. Si kastaba ha ahaatee, waad soo xasuustay markii ay ku dhowdahay inaad qaadato qiyaastaada xigta, oo keliya iska ilaali qiyaasta la seegay oo dib u bilaabista jadwalka daaweyntaada joogtada ah. Qaado tallaabada xiga ee waqtiga caadiga ah. Ha qaadan laba qiyaasood isla waqti isku mid ah ama midba midka kale u dhow.
Shuruudaha qoritaanka gaarka ah
Iyadoo ay sabab u tahay saameynta xun ee suuragalka ah ee Accutane (isotretinoin), suuq-geynta daroogada si gaar ah ayaa loo sameeyaa iyada oo loo marayo barnaamij gaar ah oo xadidan oo loo yaqaan iPLEDGE ™. Barnaamijka waxaa ansixiyay Maamulka Cuntada iyo Maandooriyeyaasha.
Qorayaasha daawada waa in la diiwaan geliyaa oo la hawlgeliyaa barnaamijkan iPLEDGE. Intaa waxaa dheer, daroogadu waxay si gaar ah u leedahay bukaannada lagu diiwaangeliyey barnaamijka isla markaana loo xaqiijiyay inay si buuxda u dabooleen shuruudaha barnaamijka.
Sidaas, waa maxay dhammaan barnaamijyada iPledge?
Ujeedada ugu weyn ee barnaamijka iPledge waa in la hubiyo in dadka kaliya ee takhasuska leh ay qaataan daawada iyo saameynaha suuragalka ah ee suuragal ah waxaa loo hayaa sida ugu yar ee suurtogalka ah iyada oo loo marayo raacitaanka daawada dawada iyo adkeynta adag ee tallaabooyinka digniinta. Waxyaabaha ku lug leh barnaamijka waxaa ka mid ah baaritaanada uurka iyo uurka. Kala hadal dhakhtarkaaga si aad wax uga ogaatid barnaamijka.
Bukaannada dumarka ah ee uur yeelan kara waxay u maleynayaan inay qaadayaan laba kaadid ama baaritaano uurjiif ah oo leh dareenka ugu yar ee 25 mIU / mL. Natiijooyinkooda labada imtixaanba waa in ay ahaadaan kuwa xun inay u helaan warqadda daaweynta loo yaqaan 'Accutane' (isotretinoin).
Imtixaanka ugu horeeya wuxuu soo qaataa takhtar takhasus u leh qorista Accutane (isotretinoin) isaga oo abuuraya in finanku u qalmo daaweynta Accutane. Imtixaanka labaad ayaa ugu horreyn la sameeyaa si loo xaqiijiyo natiijooyinka imtixaanka koowaad. Waxaa la filayaa in lagu sameeyo shaybaar leh shahaadada CLIA. Mudada u dhaxaysa labada tijaabada waa in aysan ka yarayn maalmaha 19.
Haddii aad tahay qof dumar ah oo qaba cystic acne oo leh wareegga caadada caadiga ah, baaritaanka labaad ee uurka waa in lagu sameeyaa shanta maalmood ee ugu horreeya ee caadada oo sax ah ka hor inta aan la bilaabin bilawga daaweynta Accutane (isotretinoin). Ka sokow, baaritaanka waa in la sameeyaa ka dib markaad isticmaashay laba nooc oo ka hortagga uur-qaadidda ee 30 maalmood.
Haddii caadadaada caadadu tahay mid aan caadi ahayn, ama farsamooyinka kontoroolka dhalmada ee ka hortagaya dhiig-baxa, baaritaanka labaad waa in la sameeyaa gudaheeda isla markiiba ka horreysa bilawga koorsada Accutane (isotretinoin) ee daaweynta. Sida qof dumar ah oo leh caadada caadiga ah ee caadada, baaritaankaan waa in la sameeyaa ka dib markaad isticmaashay laba nooc oo ka hortagga uur-qaadidda ee 30 maalmood.
Waxaad u baahan tahay inaad fahamto oo aad si adag u raacdo dhammaan shuruudaha barnaamijka iPledge. Haddii kale, uma qalmi doontid inaad qaadato daroogada ama warqad kale oo daawo ah.
Waxaan hore u ogaanay in ay jiraan tiro badan oo isotretinoin ah. Waxyaabaha kale ee lagaa rabo inaad ogaato waa in noocyada kala duwan ee isotretinoin ay u shaqeeyaan si kala duwan. Sidaa daraadeed, kaabayaasha noocyada qaarkood ee daroogada waa in aan lagu beddelin nooc kasta oo isotretinoin ah.
Tusaale ahaan, waa inaadan u bedelnin qalabka loo yaqaan 'Accutane capsules' oo leh kaabayaasha 'Absorica'. Sidaa darteed, haddii aad buuxiso isotretinoin-kaaga (Accutane) oo aad u aragto in ay u muuqato mid ka duwan midka hore, raadso caddayn farmashiiyahaaga.
Maxay yihiin saamaynta liddiga ah? ee Accutane
Waxaa dhici karta in marxaladdan aad la yaaban tahay, "waa shuruuda ammaan ah?"Fiican; sida ugu badan ee daroogadu u tahay daweyn ultra-macquul ah finanku, sida daawooyinka kale, waxay keeni kartaa waxyeelooyin kale. Laakiin ma jiro wax laga walwalo waxyeelada Isotretinoin gaar ahaan haddii aad raacdo warqadda warqadda daawada iyo si taxadar leh u ilaali taxaddarrada.
Waxan ka sii socon doonnaa taxadar dheeraad ah oo ku saabsan taxaddarrada (dukumiintiga iyo qalabixinta) halkan ka dib.
Waxyaabaha kale ee aad u malaynayso inaad maskaxda ku hayso saameynta daawada Accutane waa in qof kasta oo qaato daawada uu ku dhaco (waxyeelada aan loo baahnayn). Ka sokow, saameynta aan loo baahnayn caadi ahaan way baxaan markaad joojiso qaadashada dawada.
Inkastoo qaar ka mid ah saameynta daawada Accutane ay caadi tahay ayna ka daran yihiin, qaar kale ayaa ah kuwo aad u yar oo ka daran. Aynu marka hore fiirino saameynta guud ee Accutane.
Dhibaatooyinka ka yimaada Isotretinoin
Saameynaha caadiga ah ee Isotretinoin waxaa ka mid ah:
Qalacsanaanta maqaarka, gariirinta iyo cuncunka
diirka maqaarka, gaar ahaan caleemaha iyo cagaha
Afka, sanka, iyo indhaha
Aragtida habeenkii la dhimay
Daal (daal aad u daran
Dibnaha, dildillaac iyo dibnaha
Dhibaatooyin aan caadi ahayn oo ka yimaada Accutane
In kasta oo waxyeelada soo socota ay dhici karto, dhacdooyinkooda waa kuwo aan caadi ahayn. Xaqiiqdii, kaliya ka yar 0.001 boqolkiiba dadka qaata khibradda maandooriyeyaasha kuwani waa waxyeello halis ah. Saameynahan waxaa ka mid ah:
Lafaha lafdhabarashada iyo kala-goysyada
Xanuun iyo laab xanuun
Xanuun ama dhib ah markaad wax liqaysid
Maqaarka iyo maqaarka qallalan waa waxyeelo aad u daran. Nabadgelyada, ha haysan wax wax dhasha, fermabrada, ama daaweynta laser laser inta aad qaadaneyso isotretinoin ee finanka iyo ugu yaraan 6 bilood ka dib markaad joojiso, tani waxay keeni kartaa nabar ama maqaarka maqaarka.
Dad badan baa waydiiyaan, "Iskuulku ma ammaanaan haweenka uurka leh?" Jawaabtu waa MAYA; Ammaan ma ahan dhammaan haweenka uurka leh.
Dumarka uurka leh waxaa si weyn loogu niyadjabay in ay u adeegsadaan Accutane finanka ama daaweynta finanka cystic ama ujeeddo kasta oo kasta. Sidoo kale, haweenka uur qaadaya muddada daaweynta Roaccutane waa inaysan isticmaalin daroogada.
Sababta digniintaasi waxay tahay sababtoo ah saameynta Isku-qaadista Isotretinoin, iyada oo aan loo eegeynin qiyaasta Isotretinoin, waxay saameyn kartaa uur-jiifka, taasoo dhalinaysa cillado dhalasho. Qaar ka mid ah xubnaha jirka / qeybaha uurjiifka ee saameyn kara isbeddellada waxaa ka mid ah wejiga, maskaxda, dhegaha wadnaha, indhaha, iyo sidoo kale thymus iyo qanjidhada parathyroid.
Sidoo kale, haween uur leh oo qaata daawadani waxay khatar weyn u tahay ilmo iska soo ridid ​​isqaba ama dhalmo goor hore ah.
Haddii haweeney qaadata Accutane (Isotretinoin) waxay uuraysataa (uur qaadeysaa), waa inay joojiso isticmaalka dawada isla markiiba oo booqata Dhakhtar-umuliso-caafimaad oo la kulmay sunta taranka.
Inkasta oo aysan jirin hab sax ah oo uu takhasusuhu samayn karo haddii ilmaha aan dhalan ay saameyn ku yeesheen farsamooyinka Isotretinoin, isaga / iyada waxay sameyn karaan qiimeyn si loo dhiso suurtogalnimada isku mid. Ka sokow, hooyadu waxay heli doontaa la-talin si ay u xakameyso iyada oo la xariirta walwalka iyo natiijooyinka xun ee suurtogalka ah.
Dmiyuu Isotretinoin sidoo kale keenaa niyad-jabka?
Niyadjabintu waa saameynta ugu murugsan ee Isotretinoin. Waxaa jira warar qaar ka mid ah oo sheegaya in dadka qaarkood qaata diiqada khibrad daroogada. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo ku xirma qulqulaya oo la is diley.
Ma jiro cid muujin karta sida daroogadu u keeni karto niyad-jabka. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah saynisyahannada waxay aaminsan yihiin in daawada ay u badan tahay in ay carqaladeeyaan soo saarista serotonin iyo sidoo kale habka uu jidhku u isticmaalo.
Waxaa suurtagal ah in codkani uu cabsi galo, laakiin ma jirto wax digniin ah. Sababta? Inta badan dadka isticmaala Isotretinoin wax dhibaato ah ma qabaan. Xaqiiqdii, waxaa jira caddayn cadaan ah oo ku xiran isticmaalka Isotretinoin ee niyad-jabka. Weli ka sii wanaagsan; Daraasadaha qaarkood ayaa shaki ka muujiyay xiriirka suurtogalka ah ee labada u dhaxeeya.
Si kastaba ha noqotee, sida cabiraad taxadar leh, haddii ay dhacdo inaad leedahay taariikh diiqad ama nooc kasta oo maskaxda ka jirran, hubi inaad u soo jeediso takhasusahaaga caafimaad kahor intaadan bilaabin qaadashada Isotretinoin. Sidoo kale, haddii ay dhacdo in aad yeelato calaamadaha niyad-jabka waxay leeyihiin fikradaha isdilka ama maskaxda marka la qaato Isotretinoin; Ha ka baqin inaad u sheegto bixiyaha adeeggaaga daryeelka caafimaad inuu ogaado.
Sidee loola tacaali karaa dhibaatooyinka saameynta ee Accutane
Waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad wax uga qabatid saameynta daaweynta Isotretinoin ee kala duwan:
Saameynta daawada Isotretinoin Sida loola tacaali karo
maqaarka qalalan ama dibnaha Codso qoyaan (nadiifinta wajiga nudaha leh ee maqaarka xasaasiga ah)
Yaree waqtigaaga qubeyska inaad ka yar tahay daqiiqadaha 2 oo aad isticmaashid biyo qandac ah intii aad kuleylka lahayd
Kordhinta maqaarka xagga iftiinka Ka fogow qorraxda qorraxda iyo isticmaal arin weyn, kareemka qorraxda ee maqaarkaaga xitaa marka ay daruuri tahay. Iska ilaali inaad isticmaasho qoraxda ama sunbidyada
Indhaha qallalan Codso khabiirka indhaha si uu kugula taliyo dhibcaha indhaha. Haddii ay dhacdo in aad xirato lenses ilayska oo ay dareemaan raaxo la'aan markaad qaadato Isotretinoin, waxaad ku beddelan kartaa muraayadaha muddada aad qaadanayso daawada.
Afka qalalan / dhuunta Xidid cirridka aan sonkorta lahayn ama macmacaanka.
Ka codso farmashiistahaaga inuu kugula taliyo daroogo-xanibaada.
Iska ilaali jimicsiyada adag sababtoo ah waxay ka sii dari karaan xanuunka
Isotretinoin ma Ammaan tahay in la Isticmaalo?
Jawaabta ah in Isotretinoin ammaan u ah inuu isticmaalo wuxuu noqon karaa haa ama maya. Waxay ku xiran tahay qof.
Marka hore, sida hore loo soo sheegay, waxaa jira shuruudo gaar ah (tusaale, haweenka uurka leh ama kuwa u muuqda inay uur leeyihiin) kuwaas oo dadka qaar ka dhigaya mid aan habboonayn isticmaalka daroogada. Haddii aad leedahay xaaladahan, ma aha mid amaan ah inaad isticmaasho Isotretinoin
Ka sokow, Isotretinoin wuxuu si gaar ah loola jeedaa in dadka qabta finanka cystic acne / nodular finan ama finan ku yaal dhabarka ama jidhka oo aan caddeyn xitaa ka dib qaadashada retinol ee finan ama daaweyn kale oo loogu talagalay finanka. Haddii dhacdo finanku uu yahay mid khafiif ah, dhakhtarkaagu wuxuu u badan yahay inuu kuu qoro waxyaabo kale oo khafiif ah oo leh vitamin A oo ah finanka ama daaweyn kasta oo caafimaad ahaan loo caddeeyey finanku.
Sida loo iibsado Accutane (isotretinoin) online
Haddii ay tahay soo-saaraha, bukaan-socodka ama farmashiistaha, waxay buuxiyeen dhammaan shuruudaha barnaamijka iPledge oo waxay u baahan yihiin inay iibsadaan isotretinoin, waxaad si fudud u heli kartaa internetka aan-laheyn. Si kastaba ha ahaatee, xasuuso in ay jirto wareejin marka ay timaado suuq-geynta daroogada; waa in kaliya lagu iibiyo alaab-bixiyeyaasha iPadka-ogolaaday iyo farmashiyayaasha.
Si aad sharci ahaan u oggolaato inaad qaybiso ama iibiso isotretinoin, waa inaad marka hore iska diiwaan gelisaa iPLEDGE sidoo kale waa inaad ogolaato inaad buuxiso dhammaan shuruudaha loo dejiyey barnaamijka loogu talagalay qeybinta daaweynta isotretinoin.
Tixgelinta shuruudaha, aasraw.com waa meesha ugu fiican, ugu haboon iyo meesha aad ka iibsan karto isotretinoin si aan macquul ahayn. Waxaan iibinaa isotretinoin sax ah oo cayriin ah iyo isotretinoin oo loogu talagalay jumladaha iyo farmashiyayaasha qiimaha tartanka.
Sideed u maleyneysaa inaad kaydiso Accutane (isotretinoin)?
Accutane (isotretinoin) waa in lagu kaydiyaa weel xiran heerkulka qolka (59 ° ilaa 86 ° F, 15 ° ilaa 30 ° C). Meesha aad daawadaas ku haysid waa in ay ka fogaataa kuleylka iyo iftiinka tooska ahna waa inuu ahaadaa mid aan qoyaan lahayn. Ka sokow, daroogada waa in aan la qaboojin oo waa in lagu hayaa meel carruurtu gaarto.
Ha u haynin daroogada haddii aan loo baahnayn ama dib loo dhigay. Si kastaba ha ahaatee, kaliya ha u tuurin isticmaalka kaliya habka; la tasho takhasusahaaga caafimaad si aad u ogaatid jihooyinka haboon.
Aynu hadda aragno qaar ka mid ah dib-u-eegista Isotretinion dadka qaarkood oo isticmaalay daawada.
Hannah White: "Ma xasilin karto! Ugu dambeyntiina, waxaan ku guuleystay inaan wajahno waji lacag la'aan ah oo aan sanado badan ku soo jiray. Tan iyo markii aan qaan-gaaro 12 sano ka hor, waxaan la dagaallamay finanku. Waxaan lumiyay kalsoonideenimadeyda natiijo ahaan.
Waxaan isku dayey inaan ku dhawaadaba dhammaan waxyaabaha ka hortagga anti-finanku laakiin midkoodna ma awoodin inay ka takhalusaan finanka. Sannadkii hore, saaxiib ayaa igu waaniyey inaan isku dayo Isotretinoin oo aan sameeyay. Waxaan dhammaystiray daaweynta laba bilood ka hor waxaan aad ugu faraxsanahay natiijooyinka. Xanuunkaygu wuu nadiifsan yahay, dhibicyada madowna way ka baxayaan. Waan hubaa in aan daroogada u soo jeedin doono qof. "
Kelly: Anigu kuma mahadnaqayo qofkii soo qaadey isotretinoin ee finanku. Ma ahan daroogada, waxaan wali ku jiri lahaa finanka cystic daran. Waxaan kula talin lahaa qof halkaa ka baxsanaya in uu kufaraxo daawada cystic acne si uu u soo booqdo dhakhtarkiisa oo uu ogaado haddii ay sax tahay in ay isticmaalaan Isotretinoin (Accutane). Dawadani waxay runtii ka shaqaysaa wax yaabab; Waxaan kalsooni ku qabi karaa taas.
Juliana: "Inkastoo isotretinoin igu qiimeeyeen gacanta iyo lugta, waxaan ku helay qiime ugu sarreeya lacagtayda. Xaqiiqdii, waxaan dareemayaa sida aan helay wax ka badan wixii aan ku bixiyey. Waan hubaa haddii aan sii waday isticmaalka daawooyinkayga caadiga ah, waxaan ku qarashgareyn lahaa lacag badan, laakiin aan helin natiijooyinka la rabo. Waxaan si xoog leh ugu talineynaa Accutane for finna in ay garaaceen alaabooyin kale oo leh vitamin A finanku. "
Emily Hanson: "Wow! Ma noqonwaa ku faraxsanaan lahaa habka isotretinoin ee ficilka iyo natiijooyinka. Ka dib markii aan akhriyo faallo badan oo isotretinoin ah, waxaan go'aansaday inaan booqdo farmashiistaha si loo ogaado haddii daroogadu ay igu habboontahay.
Marka uu arko rikoorka daaweynta finarkayga, wuxuu xaqiijiyay in finanku la daaweyn karo iyadoo la isticmaalayo isotretinoin sida ay u daran tahay oo muddo dheer jirtay, inkastoo daweyno kala duwan. Waxaan bilaabay inaan arko horumar weyn oo aan wajahday wajigeyga asbuucyadii ugu horreeyay ee 10 ee koorsada daaweynta iyo toddobaadkii 20th, finanku si buuxda u nadiifiyay. "
Billy Harts: Anigu waxaan ahay farmashiye ruqsad haysta iyo iPequest oo leh daawo ku taalla Illinois. Waxaan bilaabay iibinta isotretinoin qiyaastii hal sano kahor iyo wiil ...! Daawadani waa iibinta sida hotcake. Xitaa iyadoo loo baahan yahay iPlay, bukaankaygu aad ayuu ugu ammaanayaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo aasraw.com si aan ugu soo dhawaado.
Salome Williams: "Ha iloobin qiimaha isotretinoin; daawadani waa heshiiska dhabta ah ee daaweynta finanka cystic. Waxay ahayd seddex sano tan iyo markii aan dhammeeyey koorsada daaweynta isotretinoin oo aan ku farxi lahaa natiijooyinka. My finanku waa la waayay, waxaanan hadda ku guuleysan karaa kalsooni. "
Charlene B: Waxtarka daawadani ee dagaalka lagaga hortago finanka daran waa mid aan la qancin. Waxaan isku dayay tobanaan dawo oo daaweyn finan ah, waxaana kaliya ee isotretinoin ah oo awooday in ay iga dhigto xor ka ah buuqa. Aad ayaan uga mahadcelinayaa daroogadaas weyn.
Isotretinoin waa shaksi kasta oo shaki ah daaweyn finan leh oo xooggan. Haddii ay dhacdo inaad qabtid finanka cystic daran ama bukaanka qaba finan yaryar ee cystic oo aan cadayn xitaa ka dib qaadashada dawooyinka finanka kale, daroogadu waxay u badan tahay inay noqoto ikhtiyaar daaweyn oo nool. Si kastaba ha ahaatee, talo-bixinta dhakhtarku waa mid aad muhiim u ah kahor intaanay bilaabin qaadashada daawadan. Sidoo kale, qofka bukaanka ah iyo kuwa wax iibiya daroogada waa in ay hubiyaan in ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha la xiriira daaweynta daawada.
Wysowski, Diane K., Joslyn Swann, iyo Amarilys Vega. "Isticmaalka isotretinoin (Accutane) ee Maraykanka: korodhka degdegga ah ee 1992 ilaa 2000." Wargeyska Agaasinka Agaasinka Agaasinka Mareykanka4 (2002): 505-509.
Feldman, S., Careccia, RE, Barham, KL, & Hancox, J. (2004). Ciladeynta iyo daweynta finanka. Dhakhtarka Qoyska Maraykanka, 69(9), 2123-2138.
Barak, Y., Wohl, Y., Greenberg, Y., Dayan, YB, Friedman, T., Shoval, G., & Knobler, HY (2005). Daaweynta maskaxda ah ee ka dambeysa daaweynta Accutane (isotretinoin). Cilminafsiga cilmi nafsiga ee caalamiga ah, 20(1), 39-41.
Stern, RS, Rosa, F., & Baum, C. (1984). Isotretinoin iyo uur. Wargeyska Agaasinka Agaasinka Agaasinka Mareykanka, 10(5), 851-854.
Barnes, CJ, Eichenfield, LF, Lee, J., & Cunningham, BB (2005). Habka la taaban karo ee loo isticmaalo daawada isotretinoin ee finanka carruurta. Dermatologiyada carruurta, 22(2), 166-169.
Kilcoyne, RF, Cope, R., Cunningham, W., Nardella, FA, Denman, S., Franz, TJ, & Hanifin, J. (1986). Daawada ugu yar ee laf-dhabarka (spinal hyperostosis) oo leh daaweyn yar oo isotretinoin ah. Raajo baaritaan, 21(1), 41-44.
Raw Proviron (Mesterolone) ee dhiska jidhka, qiyaasta, iyo wareegga Dhamaan waxyaabaha ku saabsan Trenbolone Enanthate Powder
Budada ganacsiga (274693-27-5)